အသက်ငယ်တုန်း ခရီးသွားသင့်တာ ဘာဖြစ်လို့လဲ? – Sunthit Myanmar
အသက်ငယ်တုန်း ခရီးသွားသင့်တာ ဘာဖြစ်လို့လဲ?
ခရီးတွေသွားရတာကို လူတိုင်းသဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြမှာပါ။ အလုပ်တွေပြီးမှ၊ အသက်တွေကြီးမှ ခရီးသွားမယ်ဆိုတာကတော့ မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ မဖြစ်မနေခရီးတွေသွားပြီး ဘဝရဲ့အနှစ်သာရတွေကို ခံစားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ ခရီးတွေသွားသင့်တာလဲ?
သင်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ ငယ်ငယ်က ခရီးတွေသွားပြီး ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက် ဘယ်တော့မှ နောင်တရမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ခဲ့တာ၊ သဘာဝအလှတရားတွေကို ငေးမောခဲ့တာတွေက ပြန်တွေးတိုင်း ပျော်ရွှင်နေစေမှာပါ။ ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ စွန့်စားမှုတွေက ဘဝအတွက်လည်း သင်ခန်းစာတွေကို သင်ယူနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ခရီးသွားရင်းနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့ မတူညီကွဲပြားကြတဲ့ သဘာဝတရားတွေ၊ လူနေမှုပုံစံတွေကြောင့် သင့်မှာ သနားဂရုဏာတရားတွေ၊ အကြင်နာတရားတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ တောရွာလိုနေရာမျိုးကို သွားရောက်လည်ပတ်မိရင် အဲ့ဒီနေရာမှာ လိုအပ်နေတာတွေကို ကူညီပေးချင်စိတ်တွေ မလွဲမသေခံစားရစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ သင့်နှလုံးသားက ခရီးသွားရင်း ရင့်ကျက်မှုကို ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အရာတွေကိုလည်း သိနိုင်တယ်။
စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေက ကိုယ်အပြင်မှာ မြင်ရတာတွေလောက် စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားရတာကမှ တကယ့်အနှစ်သာရရှိတာကြောင့် ဒီလိုအရာတွေကို ခရီးသွားခြင်းကသာ ခံစားရစေမှာပါ။
ခရီးသွားဖို့ဆို လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပေမယ့် အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ နောင်တမရချင်ရင်တော့ ငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်မှာ ခရီးသွားပြီး ဘဝရဲ့အရသာကို ခံစားကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Published November 8, 2017 By sanlenaing
Categorized as Knowledge, Lifestyle, Travel Tagged အသက္ငယ္တုန္း ခရီးသြားသင့္တာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ?
Email signature ရဲ့ အရေးပါမှု